Electronic Components Company, Electronic Chip Purchase - Xi Da
Iray-stop manampahaizana filana
Iray ny One Online Services
Detection Device sy Quality Control System
avy hatrany Delivery
XIDA Electronics dia tsy misy mpamatsy iray-stop Electronic Components, fa koa mandoa ny saina bebe kokoa ny asa, rehefa mila mampiasa ny vokatra. Nanomboka ny fananganana, ny orinasa dia nanome tany am-boalohany sy ny singa ara-teknika elektronika fanohanana ny mpanjifa avy 20+ orinasa.
New angovo (3%)
Appliances Security (12%)
Ny Customers manompo
XIDA Electronics dia Global mpamatsy ny vokatra, tolotra sy feno vahaolana mpanjifa ao amin'ny Electronic Components indostria sy manana traikefa be dia be eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra, rafitra vaovao, fitaterana, fitsaboana, orinasa sy ny mpanjifa ny vokatra elektronika.
Nanomboka ny fananganana 20 taona mahery lasa izay, ny orinasa foana no mifikitra amin'ny foto-kevitra hoe "Customer Voalohany", ary mikendry ny "Ento etỳ ny ambony indrindra ny tombontsoa amin'ny mpanjifa" amin'ny alalan'ny fanomezana ny mpanjifa ny faran'izay tsara, ary indrindra competitively priced vokatra sy ny tolotra . XIDA Electronics no nanao ny manome mpanjifa amin'ny azo antoka sy avo-tsara tany am-boalohany singa amin'ny tany am-boalohany fonosana.